Cake "tsy misy atody" - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Sponjy mofomamy "tsy misy atody"
fitsangatsanganana46 minitraOlona 6
Araka ny efa fantatry ny maro aminareo, manana sekolin-jaza aho ary isan'andro dia misy ankizy maro karazana manolotra karazana allergy na tsy fandeferana. Tiako ny manao azy ireo bun isaky ny fotoana hanaovana fety na fitsingerenan'ny andro nahaterahana. Ity fomba fahandro ity dia nomen'ny reny ahy tsara, raha sanatria ka manan-janaka voan'ny allergie atody aho ary te-hanomana azy mba hahafahan'ny tsirairay mihinana azy.
Tsy mbola nanomana an'io aho raha tsy María R., namana iray avy amin'ny pejy Facebook "Recipe Thermomix" Nanontany ahy izy raha manana mofomamy spaonjy tsy misy atody hitondra ny andro fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny zanany tany amin'ny akanin-jaza, fa misy zaza tsy mahazaka proteinina atody. Tsaroako avy hatrany ity fomba fahandro ity ary voakaikitry ny niafaran'ity mofomamy ity aho. Nataoko io tolakandro io ary tianay izany!
Namboarina tamin'ny ranom-boasary ary mijanona be ranony be. Izy io koa dia manana loko tena manaitra.
Manantena aho fa noho io fomba fahandro natokana ho an'ny ankizy io allergy alika na tsy fandeferana mankafy mofomamy vita an-trano matsiro.
1 Sponjy mofomamy "tsy misy atody"
Mofomamy spaonjy matsiro ho an'ny tsy mahazaka atody.
Fotoana fiomanana: 45M
Menaka tanamasoandro 35 g
Ranom-boasary 250 g
150 g ny lafarinina
Vovo-mofo 1 sachet (jereo ny fomba fahandro)
Manosotra lasitra misy menaka na dibera kely izahay.
Napetrakay tao anaty vera sy fandaharana ireo singa rehetra 10 segondra, hafainganam-pandeha 6.
Arotsakay ao anaty lasitra izay efa namboarinay ny fangaro, ary ampidirintsika amin'ny haavon'ny fatana izy io.
Mofomamy mandritra ny 35 na 45 minitra na mandra-pohy ny tsorakazo amin'ny hazo dia mivoaka madio.
Fanazavana fanampiny - Ranom-boasary makirana / Fizarana "recette tsy misy atody"
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Tsotra, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny adiny 1, Resipeo ho an'ny ankizy, Fivarotana mofomamy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » General » Tsotra » Sponjy mofomamy "tsy misy atody"
Marta C dia hoy izy:
Salama zazavavy !!! aloha dia misaotra anao noho ny resipeo tsirairay alainao ao amin'ity bilaogy ity, matsiro ireo !!! Te-hanontany anao aho, ny haben'ny lasitra hanaovana an'ity mofomamy misy pint ity, ary noho izany dia bebe kokoa na kely aho miaraka amin'ny hateviny mitovy amin'ny anao. Misaotra indrindra anao
Valiny amin'i Marta C
Marta dia plumcake kely, raha mila bun kely lehibe kokoa ianao dia avo roa heny ny habetsany.
Silvia, inona ny fomba fahandro mofomamy mahazatra izay nataonao ho an'ny ankizy kely?
Susana, ataoko mofomamy mofomamy izy ireo matetika ary tian'izy ireo izany.
sandra iglesias dia hoy izy:
Salama, manao ahoana ianao? Te hanontany anao aho hoe inona ny lafarinina mahazatra na mofomamy spaonjy?
Mamaly an'i sandra iglesias
Matetika aho no mampiasa lafarinina varimbazaha.
Salama tsara !!! Miraikitra amin'ny glog anao tontolo andro aho, mahafinaritra !!! Te hahafantatra aho raha tokony ho voajanahary ilay ranom-boankazo ????. Misaotra
Eny Cris, nataoko voajanahary izany, na dia mieritreritra aza aho fa hivoaka miaraka amin'ilay novidina koa.
Ny sabotsy no nataoko io ary tsy ny sisa tavela akory. Saingy somary kely izy io. Mba hampitomboana azy io dia azoko atao avo roa heny ny habetsany ary dia izany, sa tsy izany?
Misaotra tovovavy !!
Raha Silvia, dia hitombo avo roa heny ny habetsany, na dia mety mila manome fotoana bebe kokoa azy ao anaty lafaoro aza ianao.
Nataoko tamin'ny tsiranoka sôkôla ity satria tiako be ny mampiavaka ny volomboasary amin'ny sôkôla ary tafavoaka ny fahafatesana !!!!!! Andramo io !!!!
Elsa dia hoy izy:
Azafady mba tiako ny fomba fanamboarana ilay hazo krismasy tiako be dia be Misaotra anao nanana an'io eritreritra io
Mamaly an'i Elsa
Elsa, isaky ny mila resipe ianao dia jereo raha ao anaty index na soraty eo amin'ny bilaogy ao anaty motera fikarohana.
Eto aho avelako ho anao. http://www.thermorecetas.com/2010/12/24/receta-postres-thermomix-tronco-nevado-de-navidad/
Salama, fanontaniana iray, tokony hataoko mandritra ny 30 eo ho eo ny zaza, ohatrinona ny vola ampiasako? Tsy dia mampiasa thermomix mihitsy aho ary tsy dia lakozia loatra, fa ho an'ny zana-drahalahiko dia mandeha an-dakozia aho hanao izay rehetra ilaina.
Heveriko fa ho an'ny zaza 30 dia tsy maintsy manao biskoy 3 na biskoty 4 miaraka amin'ireo vola ireo ianao. Ny thermomix dia tsy manana izany capacité izany 😉
Salama Silvia, tena matsiro sy tsy misy atody, andramako izany. Manana fomba fahandro mofomamy tsy misy masirasira ve ianao? . Misaotra miarahaba.
paqui dia hoy izy:
Salama zazavavy, manao ny fomba fahandro aho, antenaiko fa marina izany
Mamaly an'i paqui
Salama Paqui, nanao ahoana?
maneho dia hoy izy:
Toa tsara tarehy ilay mofomamy, nomenao azy tsara izy io ka handeha haingana any an-dakozia aho, hataoko
Mamaly ny embody
Lazaiko aminao, omaly nataoko in-2 ity mofomamy ity, ny vao hitako fa tsy nivadika ho ao anatiny izy, nomeko fotoana bebe kokoa ary niafara tamin'ny fanamasinana kely, fa tsy vita tao anatiny. Nanao izany indray aho nefa tsy nanokatra ny lafaoro mihitsy ary rehefa afaka 45 min. Somary nihatsara kokoa izy io, saingy mbola somary manta ihany ny atiny. Misy tolo-kevitra ve? Misaotra anao
Pepe, fatana mpankafy ve izy io? Mety mila mari-pana somary betsaka ihany koa izy, ary apetaho amin'ny talantalana ambany kely mba hahatonga azy io ho haingana dia ambony, mety ho avy amin'ny lafaoro ilay izy.
Niaraka tamin'ny fatana vaovao nandritra ny roa taona aho, manana mpankafy izy ary tsy nampiasa azy io, nanandrana aho ary tsy azoko ny hevitra. Ary raha tsy misy mpankafy, tsy haiko izay manjo ahy izao, fa manjo ahy toa anao io, mankafy ahy izy ireo nefa tsy vita ny ataoko ao anatiny.
Ary fika iray hafa ihany koa no ampiasaiko dia ity manaraka ity, raha efa vita amin'ny ivelany sy saika ao anatiny, izany hoe mihodinkodina aho nefa tsy mivoaka madio, nefa koa tsy voapoizina. ny ataoko dia mamono ny lafaoro aho, manokatra kely ary avelao hamita ny lafaoro amin'ny hafanana azony izy, fa tsara kosa sao mirehitra ivelany.
Ok, andramako izy io, misy lafaoro ny oven fa tsy tena ampiasaiko. Hanandrana azy aho ary hametraka ilay mofomamy ambany.
salama tiako ity bilaogy ity dia efa nanao resipeo vitsivitsy ... Te-hahafantatra bebe kokoa momba ny mofomamy na mofomamy tsy misy atody misaotra betsakasssss
Salama Raquel, eto avelako anao ity rohy mofomamy tsy misy atody ity. Manantena aho fa tianao izany: http://www.misdeseosmasdulces.com/2011/09/bizcocho-de-chocolate-sin-huevo-ni.html
Misaotra nanaraka anay!
Mcjoque dia hoy izy:
Salama. Vao nividy ilay thermomix aho. Tsy mahazaka atody ny zanako vavy ary tsy mahay manararaotra varimbazaha; Raha tsy nanjary celiac, ho an'ny atody dia nahita mpisolo ny kamboty izay miasa tsara aho, fa tiako ho fantatra izay lafarinina azoko ampiasaina izay hifanaraka amin'ireo resipe izay tsy varimbazaha, misaotra. Ho ahy dia tena zava-dehibe izany
Mamaly an'i Mcjoque
AscenJimenez dia hoy izy:
Ny sasany amin'ireo fomba fahandronay dia azo atao amin'ny lafarinina hafa izay tsy varimbazaha. Mora kokoa ny mahita azy ireo ankehitriny (katsaka, trondro, oatmeal ...). Azonao atao mihitsy aza ny manao ny sasany amin'izy ireo amin'ny Thermomix anao. Fa ny fahaizana mampiasa ny iray na ny iray hafa dia miankina amin'ny fomba fahandro tsirairay ... Aza misalasala manontany anay raha te hampifanaraka fomba iray manokana ianao.
Mifidiana ho anay ao amin'ny Bitácoras Awards. mila ny vatonao amin'ny bilaogin'ny Gastronomic tsara indrindra izahay:
Valiny ho an'i AscenJimenez
mameba dia hoy izy:
Misaotra anao nanaparitaka resipeo izay afaka manampy ny marary allergy, mpanolotra thermomix aho ary izay rehetra afaka manampy anao tiako izany, misaotra mialoha
Mamaly an'i mameba
Avy amin'ny Thermorecetas dia mitady fomba mahandro mandrakariva izay manome fahafaham-po ny vondrona rehetra izahay ary manandrana manampy ireo manana allergy na tsy fandeferana satria fantatray fa tena sarotra ny mahandro amin'ireny toe-javatra ireny.
Lucia dia hoy izy:
Afaka manampy yaourt ve aho ???
Salama Lucia, azonao atao tsara ny manampy yogourt. Misaotra nanoratra anay 😉
Salama, tiako ny bilaogy.
Endrey ny hatsaran'ny mofomamy. Mila manao iray mandritra ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana aho ary misy allergy amin'ny atody sy gluten, ka te-hampiasa katsaka aho, mila mandray fepetra mitovy amin'izany ve aho? Azoko ampiana masirasira koa? MISAOTRA
Monkfish miaraka amina akondro ao anaty saosy voatabia